थुइक्क हाम्रो बुद्धि ! - मुक्त आकाश - साप्ताहिक
थुइक्क हाम्रो बुद्धि !
पढेर ज्ञान हुनु र चेतना आउनु फरक कुरा रै’छ ! फोहोर जथाभावी फाल्नु हुँदैन भनेर जान्नु ज्ञान हो भने नफाल्नुचाहिँ चेतना आउनु हो । कसैसँग बुद्धि हुनु र विवेक हुनु पनि फरक–फरक कुरा हो । पैसाको बचत गर्नु बुद्धि हुनसक्छ भने सही ठाउँमा परिचालन गर्नु विवेक हुनसक्छ ।
हामी सबैलाई थाहा छ, यो देश विविध जात, धर्म, सम्प्रदाय एवं संस्कृतिले भरिएको छ । इतिहासमा कसरी जातको विकास गरियो, कसरी धर्म–संस्कृतिको विकास भयो, कसरी कोही अघि लागे, कसरी कोही पछि परे, धेरै अध्ययन–अनुसन्धान भैसकेका छन् । तत्कालिन शासनसत्तामा बसेका कथित उपल्ला जातका केही मानिसले शक्तिको दुरुपयोग गरेर आफ्नो वृतिविकास गरे होला, तर कुनै जातको भएकै भरमा वा कुनै धर्मको भएकै भरमा न सबै धनी छन्, न कथित तल्लो जात र अर्कै धर्मको भएकै कारण सबै गरिब नै छन् । समाजमा कसरी विष घोल्न सकिन्छ र रडाको मच्चाउन सकिन्छ भनेर अराष्ट्रिय तत्वहरू सलबलाइरहेका हुन्छन् । हाम्रो एकतालाई कसरी भाँडन सकिन्छ, कसरी विग्रह ल्याउन सकिन्छ भनेर विरोधी शक्तिहरू दाउ हेरेर बसेका हुन्छन् । कसैले उक्साएको भरमा उचालिने र उफ्रने हो भने हामी हामी नरहन सक्छौं ।
हालै काठमाडौंको बानेश्वरमा बाटो विस्तारमा अन्यायमा परेको, धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा मासेको जस्ता मागका साथ भएको विरोध प्रदर्शनमा भएको प्रहरी दमन आफैंमा भत्र्सनायोग्य त छँदै थियो, तर उक्त कुरालाई जातीयता र धार्मिकताको रंग घोलेर सामाजिक संजालमा उत्तेजक तरिकाले प्रस्तुत गरी विषयवस्तुलाई अन्यत्रै मोड्ने प्रयास गरिएको देखियो । कतिले त गाउँबाट तिमीहरू आएर त हो नि हाम्रो सहर यस्तो साँघुरो र अस्तव्यस्त भएको सम्म भनेको पाइयो । के बाटो विस्तार गर्नु, सहर अस्तव्यस्त हुनु कुनै जातीय कुरा हो र ? के सबै धर्मका मानिस हिँड्ने–गुड्ने बाटो एउटै होइन र ? के कुनै जातिका मानिसले नियोजित रूपमै अर्को जातिको मानिसलाई कुनै कामकाज गर्न रोक र विकास गर्न बन्देज लगाएका छन् र ?
सामाजिक संजालमा यस्तो अफवाहजन्य सामग्री फैलाइरहेका मानिसहरू पढेलेखेका र अधिकांश युवा नै थिए । के हाम्रो बुद्धि यत्ति हो ? के हामीले बुझेको, पढेको, सिकेको यत्ति हो ? के अब हामी यस्तै–यस्तै कुरा झिकेर एकआपसमा लड्ने हो ? कोही पनि अन्यायमा पर्नु हुँदैन, आफ्नो हक–अधिकारका लागि सबैले लड्न र विरोध प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्छ तर कानुनको पालना गर्नु र कर्तव्य पालना गर्नु हामी सबै नागरिकको दायित्व पनि हो ।
आजको जमानामा आएर हामी शिक्षित र चेतनशील भनिएका युवाहरूसमेत विचलित र दिग्भ्रमित भयौं भने हाम्रा लागि कसले सोचिदेला ? गृहमन्त्री समेतले समाजमा द्वन्द मच्चाउने कुतत्वहरू सक्रिय भएका छन् भनिसकेको परिप्रेक्ष्यमा हामी बहकिने होइन, बरु सचेत भएर ती अदृश्य दुस्मनको पहिचान गर्नुपर्छ । कसैले एकछाक खान दिएको भरमा वा केही पैसाले क्षणिक रूपमा गोजी भरिदिएको भरमा आपसमा लड्न र काटमार गर्न तम्सिने हो भने हाम्रो विनाशलाई कसैले रोक्न सक्दैनन् । नयाँ संविधानले हामी सबैलाई उत्तिकै अधिकार दिएको छ । के माथिल्लो जात, के तल्लो जात, कमाइका लागि सबैले उस्तै संघर्ष गर्नु र बिदेसिनुपरेकै छ ।
समाज रहेसम्म आपसी द्वन्द्व त रहन्छ नै, तर त्यसलाई सहमतिमा हल गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । अब पनि समस्यालाई विषयान्तर गरेर सानातिना कुरामा अल्झेर बस्ने हो भने यो देश कहिल्यै अघि बढ्न सक्नेछैन । हामी कुनै जातका हौं भने हामी नेपाली जाति हौं र हाम्रो धर्म केही छ भने मानवताको धर्म छ ।
त्योभन्दा बाहेक हाम्रो दोस्रो जात र धर्म हुनु हुँदैन । सनातनदेखि हामीले मान्दै आएका विविध संस्कृति नै हाम्रा धरोहर हुन् । हाम्रा कला र सम्पदाको माया यदि कसैलाई छ भने हामी नेपालीहरूलाई नै छ । हामी सबै मिलेर यिनको रक्षा गर्नुपर्छ । हामी कसैलाई पनि आफ्नो जातीय धर्म, संस्कृति मान्न कसैले अवरोध गरेको छैन, तर यदि कोही त्योभन्दा राम्रो धर्म हाम्रो छ, हाम्रो संस्कृति राम्रो छ भन्दै हामीलाई फकाउन आउँछ भने सचेत हुनुपर्छ । यति कुरा बुझे पुग्छ कि यहाँ कुनै नयाँ धर्म मानेबापत कोही रातारात धनी र सुखी हुनेवाला छैन र पुरानाले हामीलाई गरिब र दु:खी बनाएको पनि होइन ।
एक तहमा राजनीतिक संक्रमणकाल सकिएर देशमा स्थिरता आएका बेला अब के कुरा झिकेर हाम्रो समाज र देशलाई अघि बढ्न नदिने भन्ने खेलमा बिचौलियाहरू अनेक भेषमा समाजमा पसेका हुन सक्छन् । बेलैमा हामी युवा चनाखो भै त्यस्ता भूतहरूलाई सिमाना कटाउन सकेनौं र आपसमै लड्न थाल्यौं भने समृद्ध देशको नागरिक भएर बाँच्ने सपना कहिल्यै पुरा हुनेछैन । युवाहरू एक भै हातेमालो गरौं, यो देश बनाउने हामीले नै हो । फुटेर होइन, जुटेर काम गरौं ।
आफैंलाई धिक्कार्दै थुइक्क हाम्रो बुद्धि भन्ने दिन कहिल्यै नआओस् ।
प्रदीप र कर्मा सँगसँगै